PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး NLD စွန့်လွှတ်ပြီလား ?????
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး NLD စွန့်လွှတ်ပြီလား ?????
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)က မတ် ၈ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံအပြီးတွင် နိုင်ငံရေးဝါဒ သဘောထားနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထုတ်ပြန်လိုက်ရာ မူဝါဒ သဘောထားများတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လုံးဝမပါရှိပေ။
၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ကျင်းပခဲ့သော ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ တိုင်းရင်းသား တန်းတူညီမျှရေး အပါအ၀င် ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် နှစ်ပေါင်း ၂၅ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပသော ညီလာခံအပြီး ထုတ်ပြန်သော မူဝါဒနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး မပါဝင်တော့ဘဲ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြတ် ခိုင်မာရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုပေါ်တွင် အခြေခံသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ တည်ဆောက်မည် ဟူသော မူဝါဒများသာ ပါဝင်သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးကို စွန့်လွှတ်ခြင်း မဟုတ်၊ သို့ရာတွင် အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေး သဘောထားနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဘယ်ကြောင့် မထည့်သွင်းထားသနည်း ဆိုသည်ကိုမူ မိမိနားမလည် ဖြစ်ရကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကျနော်တော့ နားမလည်ဘူး။ ဘာကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး မပါလာတာလည်း မသိဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လမ်းစဉ်ကို မပစ်ပယ်ဘူး။ ရိုးရိုး ချွတ်ချော် သွားတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောနေတာပဲ။ ဒီ သဘောထား ပြောင်းတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်လည်း ဆွေးနွေးတဲ့ အထဲမှာ မပါဘူး။ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်တွေပဲ ဆွေးနွေးကြတာ” ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆိုသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လူထုလူတန်းစား အသီးသီးပါဝင်သော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြီး လူထုသဘောထား ထုတ်ဖော်ကာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်သို့ အသိပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ဆိုသည်။
“အခြေခံ ဥပဒေပြင်ရေးကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီလုပ်ရမယ်။ ဒုတိယအချက်က လမ်းပေါ်ထွက်ရမယ်။ လမ်းပေါ်ထွက်ဆိုတာ ဆန္ဒပြဖို့ မဟုတ်ဘူး။ လမ်းဘေးတွေမှာ ရပ်ကွက်တိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး ရှင်းလင်းပွဲတွေ လုပ်ရမယ်။ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကလည်း လုပ်ရမယ်။ ဒါမှသာလျှင် လူထု အကြံပြုချက်တွေ ပေါ်လာမယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ပေါ်လာမယ်။ လူထု ထောက်ခံတာတွေ ပေါ်လာမယ်။ သူတို့ သဘောထားတွေ ပေါ်လာမယ်။ ဒါတွေ အကုန်လုံးက ပြည်သူ့ အသံတွေပဲ။ ဒီအသံတွေကို လွှတ်တော်ထဲ ပို့ရမယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ဆန္ဒ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့သဘောထားတွေ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားရင် လွှတ်တော်က သိပ်ငြင်းလို့ မရတော့ဘူး” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အရန်ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်လည်းဖြစ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်သူ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကလည်း အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦး ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို အလေးပေး ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မူဝါဒ တရပ်အဖြစ် မပါဝင်လာမှုကို မသိရှိကြောင်း ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအုန်းကြိုင်ကမူ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးသည် ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာ စာတမ်းသာဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေး ၀ါဒ သဘောထားနှင့် ရှေ့ဆက် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မပါဝင်သော်လည်း ထိုမူဝါဒကို စွန့်လွှတ်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေး ၀ါဒသဘောထားနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နိုင်ငံရေးဝါဒ၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အလုပ်သမား၊ ကျောင်းသားလူငယ်၊ လူထုဘ၀သက်သာချောင်ချိရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တော၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကဏ္ဍတို့ပါဝင်သည်။
ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအပိုင်းတွင် တပ်မတော်အပေါ် အဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထားများ ရှင်းလင်း ဖော်ပြထားပြီး တပ်မတော်သည် နိုင်ငံအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း၊ တပ်မတော်သည် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်ကို ကာကွယ် ဖြည့်ဆည်းသော အင်အားစုဖြစ်ရေး၊ ခေတ်မီ တပ်မတော်ဖြစ်ရေး၊ ပြည်သူ့ချစ်ခင်သော တပ်မတော်ဖြစ်ရေး၊ တပ်မတော်နှင့် ကာကွယ်ရေး ယန္တရား တရပ်လုံးသည် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်အောက်တွင် ရှိရေး တို့ကို အဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထားအဖြစ် ထုတ်ပြန် ဖော်ပြ ထားသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံက ဗဟိုကော်မတီဝင် ၁၂၀၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဦးဟံသာမြင့်၊ ဦးအုန်းကြိုင်၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မေ၀င်းမြင့်၊ ဦးဝင်းထိန်၊ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ ဒေါက်တာအောင်မိုးညို၊ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်၊ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်၊ ဦးကျော်ခင်၊ ဦးညီပု၊ ဒေါက်တာဦးမျိုးအောင်တို့ဖြစ်သည်။